Enough is Enough: AU urges Western countries to lift sanctions imposed on Zimbabwe - Africa News Watch
The African Union has called on Western countries to lift sanctions that have targeted Zimbabwe for more than 20 years imposed during the regime of President Robert Mugabe.
The Chairperson of the AU, President Macky Sall of Senegal, who made the appeal while delivering a speech at the opening of the AU Humanitarian Summit in Malabo, Equatorial Guinea, on Friday, said the Western sanctions had exacerbated Zimbabwe’s economic and humanitarian crisis.
“Bearing in mind the repeated request of the African Union, I solemnly call for the lifting of the foreign sanctions that have been imposed for years on our brothers and sisters in Zimbabwe.
“In these times of deep crisis, these sanctions further worsen the living conditions of the Zimbabwean people,” the AU Chair said in his speech.
The first day of the AU Summit was dedicated to humanitarian crisis in Africa and following the opening ceremony, many African leaders added to the plea to countries like the United Kingdom, the United States and other European countries to lift the sanctions on Zimbabwe for the sake of the people.
The sanctions on the southern African country began in 2002 when the United States first imposed what it called targeted measures on the government of Zimbabwe, including financial and visa sanctions against selected individuals, a ban on transfers of defence items and services, and a suspension of non-humanitarian government-to-government assistance.
In 2003, the U.S. Department of the Treasury also imposed targeted financial sanctions against individuals and entities in connection with undermining democracy, human rights abuses, or public corruption, especially officials of the Mugabe administration and their families.
Related Topics:African UnionFeaturedRobert MugabeSanctionsZimbabwe